«Tsy anareo irery !» -
AccueilTresaka«Tsy anareo irery !»
«Tsy anareo irery !»
06/12/2017 admintriatra Tresaka 0
Mbola averina eto indray na dia efa nambara sy napetrapetraka matetika aza izao fanontaniana manaraka izao hoe: « natao ho an’iza ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra? Natao ho an’ny mpanohitra irery ihany ve sa natao ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy an-kanavaka firehana, antoko, firazanana, saranga, fari-pahaizana, sns?”.
Voatery mamerina izany adihevitra izany androany rehefa namaky ny lahatsoratra navoakan’ny gazety La Vérité omaly, izay milaza hoe “tandremo tratra farany” sy ny hoe “gare à ceux qui n’auront pas eu le reflexe de quitter le navire assez tôt”. Tsy fantatra moa ireo teny ireo, na fampitandremana, na endrika fampihorohoroana fa dia ireo aloha no voalazan’ity gazety ity, izay miantefa mivantana amin’ny mpanao gazety mpomba ny fitondrana izay namaly hatrany ireo fanenjehana, na avy amin’ny Fiangonana izany, na avy amin’ny mpanao politika.
Tsy maintsy milaza ny fomba fahitany ny fanenjehana atao amin’ny fitondrana ny mpanao gazety mpomba ny fanjakana. Tsotra ny antony, mitanila sy mizana tsindrian’ila mazana ny fanakianana mivoaka avy amin’ireny ankolafin-kery sasantsasany ireny, eny hatramin’ny Fiangonana aza. Fahalalahana miteny sy maneho hevitra eto ny resaka, izany hoe, samy manana ny fomba fahitany azy ny tsirairay avy.
Rehefa manakiana ny fitondrana amin’izao fotoana ve ny FFKM dia tokony hosoran-tantely fa rehefa nikasa hiditra an-tsehatra namaha ny olana nandritra ny krizy 2009 dia tsy misy ilàna azy? Nailiky ny fitondrana Tetezamita sy ny antoko politika mpiara-dia tamin’ny mpanongam-panjakana nge ny FFKM tamin’izany fotoana e! Aoka tsy hanadino ny tantara isika fa tsy neken’ny mpiray petsapetsa tamin’ny HAT mihitsy ny vahaolana naroson’ny FFKM tamin’izany andro, ary ireo hainoamanjery mpomba ny Tetezamita tahaka ny la Vérité indrindra no anisan’ny namely mafy ny FFKM tamin’izany. Tsy anareo irery ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra!
find properties dans Atsimondrano-BASY KILALAO NANAFIHANA TOKANTRANO
DC and Marvel commics action figures dans « RAMILY TEODORIN ! »
agen sbobet terpercaya: Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I…
best autism friendly vacation ideas: *When do you think this Real Estate market will go back in a positive direction? Or is it still too…